Tsukishima Station , Tokyo (22nd Jan)
English • Jan 26, 2022
We TTAJ undertook our weekly pamphlets and tissues sharing activity on this week Saturday (2022/1/22) at Tsukishima Station. "AUN" team collaborated with us this week activity for fund raising in order to support CDMers and other areas needed for help in Myanmar.
Due to inconveniences, we had to finish our activity earlier than expected time.
We were able to hand out approximately 50 pocket tissues and pamphlets from 11:30am-14:00pm.
ယမန်နေ့ ၁ လပိုင်း ၂၂ ရက်နေ့မှာTTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Tsukishima ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
Associations of United nationalites In Japan မှလည်း လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အလှူငွေကောက်ခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နေရာအခက်အခဲကြောင့် ပန်းဖလက်ဝေခြင်းကို သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ထက်စောပြီး ပြီးဆုံးခဲ့ရပေမယ့် တကူးတက လာရောက်ကူညီ အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြသော Volunteers ညီအကို မောင်နှမများ ၊အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမား များအားလုံးကို TTAJ မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။
နေ့လည် ၁၁ နာရီ ခွဲ မှ ၂ နာရီ အတွင်းလက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၅၀ ကျော်၊တစ်ရှူး အခုရေ ၅၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။